I-Ceramic Face Seal Ring ne-Surface epholile China Manufacturer
Home > Imikhiqizo > IziKhalazo zeCeramic > I-Ceramic Seal Faces > I-Ceramic Face Seal Ring ne-Surface epholile
Uphawu lwe-silicon carbide ceramic lunikeza amandla amakhulu, ukugqoka ukugqoka, nokuguquguquka okungaphezu kwalezo ezinye izinto eziningi zobuciko zobuchwepheshe. Ubuso be-ceramic face yi-ceramic eqinile kakhulu yezobuchwephesha ezinezindawo ezinhle kakhulu ekubunzima, ukuhlukumezeka kokuqina, kanye nokumelana nokushisa; konke ngaphandle kwempahla ejwayelekile kakhulu ye-ceramics - ukukhanya okuphezulu.
Indima yesibindi se-ceramic ukuvala igebe phakathi kwezindlu kanye ne-shaft ejikelezayo kangangokuthi akukho ketshezi noma igesi elibalekela. Lesi sakhi esivulekile sizuzwa ngendawo ejikelezayo yokufaka uphawu ekungeneni kwe-shaft. Nge-conductivity yabo evelele yokushisa, coefficient yokunciphisa ukushisa okuphansi ne-modul ephezulu ye-Young, i-ceramics ephezulu yokusebenza yenza ukunciphisa noma yikuphi ukukhwabanisa ebusweni noma ubuso bokufaka imithwalo ngaphansi kwemithwalo enomshini nokushisa. Ngokuhambisana nokuphikiswa okunjalo emithonjeni enobungozi, yiyona impahla ye-tribological yesimiso sokugada esibonakala ngokuyinhloko ekukhetheni impahla. Isici esibalulekile ukuthi i-gap seal igcwele noma ingabe isetshenzisiwe (kungaba yi-liquid noma i-gas).
Isimo esikhethekile se-zirconia tube ceramic